Ngwakọta Semalt na-atụ aro 3 Nzọụkwụ Dị Mfe Iji Wepụ Ọdịnaya Weebụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọpụ data site na ibe weebụ, saịtị mgbasa ozi mmekọrịta, na nkeonwe blọọgụ, ị ga-amụta ụfọdụ asụsụ mmemme dika C + na Python. N'oge na-adịbeghị anya, anyị ahụla ihe dị iche iche nwere ike ịbanye na Ịntanetị, ọtụtụ n'ime okwu ndị a metụtara ọdịnaya ihe mkpofu na iwu ndị na-akpaghị aka. Maka Windows na Linux ọrụ, ọtụtụ ngwa weebụ (scraping ngwaọrụ e mepụtara na mezie ọrụ ha ruo n'ókè. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịchọta ọdịnaya na aka, mana ọ bụ ntakịrị oge.
N'ebe a, anyị atụlewo ụzọ dị mfe iji wepu ọdịnaya weebụ na ihe na-erughị 60 sekọnd - voir paie nethris clients.
Onye ọ bụla na-eme ihe ọjọọ bụ:
1. Nweta ngwá ọrụ dị n'ịntanetị:
I nwere ike ịnwale usoro ọ bụla a ma ama na ntanetị weebụ dịka Nwepụ, Bubata. io, na Portia site Scrapinghub. Bubata. O kwuru na ọ ga-ewepụ ihe karịrị nde weebụ anọ na Intanet. Ọ nwere ike inye data dị mma na nke bara uru ma baa uru maka ụlọ ọrụ niile, site na mmalite maka ụlọ ọrụ buru ibu na ụdị ndị a ma ama. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a dị ukwuu maka ndị nkụzi onwe ha, ndị ọrụ ebere, ndị nta akụkọ, na ndị mmemme. Bubata. a maara nke ọma iji zipu ngwaahịa SaaS nke na-enyere anyị aka ịmegharị ọdịnaya weebụ n'ime ozi nwere ike ịhazi na nke ọma. Igwe ihe omumu ya na-eme ka mbubata. na nhọrọ nke ma coders na ndị na-abụghị coders.
N'aka nke ọzọ, Mwepụ na-agbanwe ọdịnaya weebụ n'ime data bara uru na-enweghị mkpa nke Koodu. Ọ na-enye gị ohere ịhazi ọtụtụ puku URL n'otu oge maọbụ na oge. Ị nwere ike ịnweta ọtụtụ narị na ọtụtụ puku ahịrị data site na iji wepụ. Usoro nyocha weebụ a na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe na ngwa ngwa ma na-agba ọsọ na usoro igwe ojii.
Portia site na Scrapinghub bụ ihe ọzọ na-ekpuchi ihe nchọgharị weebụ na-eme ka ọrụ gị dị mfe ma na-ewepụta data na usoro ndị ị chọrọ. Portia na-ahapụ anyị ịnakọta ozi sitere na weebụsaịtị dị iche iche ma ọ dịghị mkpa maka ihe ọmụma ọ bụla. Ị nwere ike ịmepụta template site na ịpị ihe ma ọ bụ peeji nke ịchọrọ iwepụta, Portia ga-emepụta ududo ya nke ga - ewepụ data gị ma ga - akụkwa ọdịnaya weebụ gị.
2. Tinye URL nke onye na-asọmpi:
Ozugbo ị họpụtara ọrụ ntanetị weebụ dị mkpa, nzọụkwụ ọzọ bụ ịbanye na onye na-asọmpi gị ma malite ịgba ọsọ gị. Ụfọdụ n'ime ngwá ọrụ ndị a ga-ehichapu mkpokọta weebụ gị n'ime oge ole na ole, ebe ndị ọzọ ga-ewepụta ọdịnaya maka gị.
3. Na-ebupụ data gị nchịkọta:
Ozugbo achọtara data achọrọ, nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịbupụ data gị. Enwere ụfọdụ ụzọ ị nwere ike mbupụ data a kpọpụtara. The web scrapers mepụta ozi na ụdị nke tebụl, ndepụta, na ụkpụrụ, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ ibudata ma ọ bụ mbupụ faịlụ chọrọ. Ụdị nkwado abụọ kachasị bụ CSV na JSON. Fọrọ nke nta ka ndị ọrụ nchịkọta ọdịnaya niile na-akwado usoro a. Ọ ga-ekwe omume ka anyị na-agba ihe nchapu anyị ma debe data ahụ site na ịtọpụta aha njirimara na ịhọrọ usoro a chọrọ. Anyị nwekwara ike iji nhọrọ Nkebi nke Pipụ nke mbubata. Ee, Extracty na Portia iji setịpụta ihe ntinye na pipeline ma mezie CSV na JSON faịlụ ka a na-emecha nsị.